Madaxwayne Mustafe Cagjar maanta iyo magaalada Dire Dhabe. – Xeernews24
Madaxwayne Mustafe Cagjar maanta iyo magaalada Dire Dhabe.
12. April 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Madaxwaynaha dowlada deegaanka soomalida mudane mustafe muxumed cumar ayaa la sheegay inu soo gaadhay galinkii danbe ee maanta magalada dire dhabe.
Madaxwayne mustafe muxumed cumar ayaa imaatinkiisani kusoo beegmaya xili uu ka cabsi qabo inay Shacabka Sitti Bannaanbax Nabadeysan sameyaan taaso ay kaga soo horjeedaan dulmiga iyo dilka ,tacadiyada lagu hayo Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Dirdhabe iyo Galbeedka Sitti .
Mustaf Omar iyo Dowladdiisa aya iska idho tiray muddo badan cabshada iyo Xasuuqa lagu hayo shacabka sitti markay Bannaanbax noqoto lasoo booqdo uun si xaaladooda loo dajin laha.
Mustafe Omar Waa Kuma ?
1:Is-beddelka kadib waa Madaxweynihii ugu horreeyay ee Galbeedka Sitti Canfar ugu hibiiyay .
2:Madaxweynaha wali ka hadal Xasuuqa ka dhex socda Gobolka sitti iyo Dirdhabe .
3:Mustafe iyo Xukuumaddiisa waxey dayaceen Maamulka dirdhabe oo ah magaalo soomaaliyeed oo la isku haysto taaso ay ka qadiyeen inay xubin ka noqdaan Xisbiga SDP ee dowladda Deegaanka Soomaalida .Waxeyna muran gali doontaa lahaanshaha magaalada inay Tahay Magaalo soomaaliyeed .Sido kale Damaciii Oromada oo sii xoogseyn doona kadib markay Arkeen in Rajo laga qabin Dirdhabe Deegaanka soomaaliduna ay dafireen.
4:Xukuumaddiisu Ila hadda kamay hadal shacabka laga dhex Ugaadhsan Gobolka sitti hooyna u noqday Xabsiyo canfareed.
5:Xukuumadda ka caajistay Inay Liyuu Policeka Geeyaan Goobahaas uu dagaalku ka socda si Ammaanka Loo sugo weeraradan Joogtada ahna lagaga hor tagi laha .
5:Ballaamihii Marki hore ay la galeen Aabo Mustafe waxba kamay fulin, kamana hadlaan dhibta ka taagan Gobolka .
Shacabka sitti oo aad ugu riyaaqay dowladda Cusub, tageero wayna u qaba mustafe iyo Maamulkiisa.
Balse waxey u eegtahay Rajo la lumiyay uu Mustafe iyo Xukuumaddiisa Gacamaha hadda ku burburinayaan.
Mustafe iyo Xukuumaddiisa weedhaha ay kula hadliyaan Reer sitti aya ah hadallo qabyo ah oo jihana u jeedin.Inkastoy wali fursado badan ay haystaan inay dib isu soo qabtaan ay rajada shacabka soo celiyaan aya haddana laga maarmin in wax qabad cadcad shacabku arkaan laguna raali galiyo.
Khaayinimada iyo socdaalladan bila natiijada haa laga waantoobo .
Xukuumadda Mustafe markaa afarta dhinac ka eegto waxey u eegtahay sida xukuumad Wacad ku martay In Gobolka Sitti&Dirdhabe Canfar iyo Oromo loo sooro.Wali ka hadalka dhibaatooyinka ha dambeyse inay shacabka lagu Gumaadi Ambulance, iyo caawinaad ugu deeqdo wey kari la’yihiin.
Waqtigan aan joogno oo ah xilli qowmiyad kaste is difaacayan , madaxweyne kastena shacabkiisa u dooda waxey u muuqata Deegaanka soomaalida inay wali baadigoobiyaan Rajadaas.
Kala-Guur Dowladdnimo Siiba Ethiopiya waa xilli laga faaiideysto sidii loo soo celin laha dhul iyo Hanti wixi naga maqna balse Nasiib darro Xukuumadda Mustafe aad bay uga gaabiyeen hawshaas.
Siyaasiyiinta Gobolka Sitti matala qofna kama qarsoona Inay Casri dheer Gogosha dhigteen ila hadda kasoo toosin .Qaar baa wali ka dhaadhici la‘ inay Shacab u fadhiyaan Kursiga iyo in kale.
Su’aalaha bulshada isweydiinayaan aya ah Siyaasiyiinta aan doorannay God kee ku jiran ? Goormaa la afduubtay? Isu soo Duub Waa siyaasiyiin Rajadii iyo himillooyinkii ay tiigsanayeen Shacabka sitti Badda cas ku daray.
Shacabka Sitti waxey u muuqdaan inay noqdeen Reer Falastiin markaad eegto dhinaca samirka.
Ugu Dambeyn waxaan kula talinaya Gobolka Sitti &dirdhabe Inay Bannaanbaxyo Nabadeysan ka hirgaliyaan dhammaan Gobolka Sitti loona Joojin cidkaste oo cargaladeyn rabtaa.
„“Dowladda Kolba Intaad riixdaan culeyska saartaan unbay wax idinku qabani, kolba intay idin riixdana lugooyo unbay idinku noqoni
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/cagjar.jpg 360 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-12 07:52:322019-04-12 07:52:32Madaxwayne Mustafe Cagjar maanta iyo magaalada Dire Dhabe.
Kalikood taliyayaashii Qaaradda Afrika imisaa ka soo hadhay Maanta? Dib u milicso maamulka Hargeysa marna baryo badan marna been badan